HORDHAC: Dynamo Kyiv VS Chelsea Xogta kulanka iyo xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
HORDHAC: Dynamo Kyiv VS Chelsea Xogta kulanka iyo xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey.
By admin on 14/03/2019 No Comment
Khamiis, Marso, 14, 2019 (HNN)- Kooxda Chelsea oo guul muhiim ah ku soo gaartay garoonkeeda lugtii koowaad ee wareega 16-ka ee tartanka Europe League ayaa markan caawa kula ciyaari doonta kooxda Dynamo Kyiv garoonkooda kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka .
Kooxda Bules ayaa guul 3-0 ku soo xaaqday Dynamo Kyiv lugtii hore wax ayna u muuqtaa in Chelsea hal lug la sii gashay u gudibada wareega xiga ee sided dhamaadka tartanka Europe League .
Wararka labada dhinac ka hor kulanka :
Dynamo Kyiv ayaa dib safkeeda ugu soo dhaween doonta xidigeeda Benjamin Verbic kaas oo ka soo noqday ganaax balse rajada kooxda Dynamo ayaa ah mid allow sahal ah madaama kulankii lugtii hore lowga soo adkaaday 3-0 ciyaartii ka dhacday Stamford Bridge.
Vitaliy Buyalskiy oo ka tirsan kooxda reer Ukranian ayaa kulankan ku seegaya ganaax kaddib markii ay u buuxsameen jaalayaal .
Ross Barkley ayaa seegi kara kulanka lugta koowaad ee wareega xiga ee tartanka Europa League hadii uu qaato kaar hurdi ah kulankan , xidiga reer England ayaana muhiim u ah safka uu hogaamiyo macalin Maurizio Sarri .
Macalinka reer Italy ee hogaamiya kooxda Bules ayaa markale adeegsan doona saf ciyaareedkii 3-0 ku soo adkaaday kulankii lugtii hore oo ka dhacay garoonkooda Stamford Bridge, xidigaha kala ah Ruben Loftus-Cheek iyo Callum Hudson-Odoi ayaa rajeenaya in ay ku soo bilowdaan kulankan .
Dhinaca kale ciyaartoyda Davide Zappacosta, Willy Caballero iyo Ethan Ampadu ayaa dhamaantood rajo ka qaba in ay ka soo muuqdaan kulankan , Gonzalo Higuain ayaa lagu soo waramayaa in uu qabo dhaawac fudud loo mana badinayo in uu ku soo bilowdo kulanka.
Kulanka : Dynamo Kyiv VS Chelsea (UEFA Europa League).
Goobta : Stadion NSK Olimpiyski
Goorta : 8:55 oo habeenino
Garsoorka : Tobias Stieler (Germany)
Chelsea ayaa soo guuleysatay 11 –ka mida 12-kii kulan ee ugu dambeyey oo ay ciyaarto tartanka(UEFA Europa League).
Chelsea ayaa dhalineysay ugu yaraan labo gool shanatii kulan ee ugu dambeyey oo ay ciyaarto tartanka(UEFA Europa League).
90% boqolkiiba kooxaha soo dhaliya sedex gool kulanka lugta koowaad ee Europe League heerkiisa bug baxa waxa ay u gudbayeen wareega xiga ( 73-ka mida 81-dhacdo ee la soo dhaafay )
Dynmo kyiv ayaa garoonkeeda ku marti gilin doonta kooxda Chelsea markii ugu horeysay kulan ka tirsan tartamada Yurub tan iyo October 2015 markaas oo ay wada yeesheen kulan ku dhamaaday 0-0 oo ka tirsanaa tartanka Champions League .
9-kulan oo uu xili ciyaareedkan u ciyaaray kooxdiisa tartanka Europe League , Willain ayaa dhalinayey gool ama caawainayey 7-kamida kulamadaas ( 3-gool iyo 5-caawin )
Dynmo kyiv ayaa u gudbeysay wareega ee xiga ee tartanka Europe League labdii mar ee ugu dambeysay ee laga soo badiyo kulanka lugtaa koowaad ee tartanka heerkiisa bug baxa.
Safafka macquulka ah ee labada dhinac :
HORDHAC: Dynamo Kyiv VS Chelsea Xogta kulanka iyo xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey. added by admin on 14/03/2019